China BA simbi isina simbi coils Kugadzira uye Fekitori | Huaxiao
BA pamusoro ndeyekupedza kwakakosha, kunge girazi kupedzisa asi isina kupenya zvakakwana kuti igirazi. Chiedza chekuvharidzira chinonziwo kupenya kwakapenya, ndechokuzadza zvigadzirwa munzvimbo yakavharirwa zvishoma nezvishoma kutonhora zvishoma nemazana mashanu emadhigirii, wozoita kuti kutonhodza kwechisikigo kuchiri munzvimbo yakavharirwa, mushure meizvozvo kuti uwane kupenya uye kwakanaka pamusoro, uye pasina kukonzera decarburization mamiriro.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve BA simbi isina simbi coil, Bright Annealing simbi isina simbi coil
Pedzisa: BA, Chiedza Annealing
Firimu: PVC, PE, PI, Laser PVC, 20um-120um, bepa rakabatana
Ukobvu: 0.3mm - 3.0mm
Giredhi: 304 316L 201 202 430 410s 409 409L nezvimwewo
Chinangwa uye mukana weBA isina simbi coil kugadzira
1.Kubvisa kuomesa basa, kuwana chinogutsa chimiro chesimbiirographic. Kana iko kushandiswa kweakasiyana mashandiro ekuita, iyo microstructure yeakajeka annealed mushure mekukumbira kwasiyana, kupenya kupisa kurapwa maitiro kwakasiyanawo.
2.Kuwana kune isiri-oxide yakajeka, yakanaka ngura kuramba pamusoro. Sezvo kupenya kunopisa kuchipisa pamusoro pechigadzirwa pasi pemhepo inodzivirira yemusanganiswa wehydrogen uye nitrogen, isina-oxidized uye inopenya nzvimbo inowanikwa nekudzora zvakanyanya mhepo iri muchoto, kunyanya, kuchena, mweya wakasara uye dova poindi. Zvichienzaniswa nenzvimbo inowanikwa neakajairika annealing uye pickling, iyo chromium-yakapera pamusoro pemutsara yakaderedzwa nekuda kwekushayikwa kweiyo oxidation maitiro, uye ngura kuramba kuri nani pane iyo 2B ndiro mushure mekupora.
3.Iyo yakajeka kugadzirisa Chengetedza kupera kweiyo inotenderera nzvimbo, haichakwanise kugadziriswa kuti iwane inopenya pamusoro. Nekuda kweye annealing inopenya, iyo coil kana sheet sheet inochengeta yayo yepakutanga simbi kubwinya uye yakawanikwa ine inopenya pamusoro padyo negirazi pamusoro, inogona kushandiswa zvakananga pasina kumwe machining, kune zvakajairika zvinodiwa.
4.Inogona kugadzira yakakosha rolling paturu pamusoro pevhu kana coil. Sekuwedzera chiito, hapana shanduko pamusoro pesimbi, iyo nzvimbo inogona kunyatso chengetedzwa iyo pateni, iwe unogona nyore kugadzira yakakosha inotonhora-yakakungururwa tambo kana coil.
5.hapana kusvibiswa kunokonzerwa neyakajairika nzira yekunhonga. Mushure mekuwedzera mbichana hakudi kunhonga kana kurapwa kwakafanana, usashandise akasiyana emakemikari zvinhu senge acids, hapana matambudziko ekushatisa anokonzerwa nekunhonga.
6.Kuti uwane kudzora kwesimbi isina simbi coil yakatwasuka. Nekuti dhizaini inopenya inovhara vira inobvumidza chikamu-chikamu kugadziridza pamwe nehupamhi hwetambo kana coil, iyo-pamutsetse kudzora kweiyo jira inogona kuzadzikiswa nekugadzirisa iyo inotonhorera mwero muhupamhi hwekutungamira kweiyo strip neiyo kuyerera kwemhepo kuchinjisa.
Pashure: NO.4 simbi isina waya
Zvadaro: Yakarurama simbi isina simbi coil